Akukakafiki Isikhathi Sokumisa Ukukhangisa Ukuphrinta - Print Peppermint
Akukakafiki isikhathi sokumisa ukukhangisa kokuphrinta
January 18, 2022 | Ukukhangisa, Marketing, phrinta umkhakha
Kulo mhlaba wedijithali osafufusa, imali engenayo yezikhangiso zokuphrinta yehlile ngokuhamba kweminyaka, kwase kuba nobhubhane. Idatha ikhombisa ukuthi amaphephandaba aphezulu angama-25 e-US alahlekile U-20% wokunyatheliswa kwawo kosuku lweviki phakathi kwekota yokuqala ka-2020, kanye ne-Q3 2021. Kodwa-ke, kusenzima ukuthi amabhrendi eqe lesi sikhungo ngokuphelele. Ngaphandle kokwanda kokuxhumana kwe-inthanethi nama-smartphone emhlabeni wonke, amaphephandaba ahlala engumthombo othembekile wolwazi ezigidini zabafundi.
Ngo-2021, imali engenayo yokusakazwa kwamaphephandaba emhlabeni wonke yayimile $ 46.45 billion, ngemodi yokuphrinta, uma kuqhathaniswa ne-$ 6.7 billion kumodi yedijithali. E-US kuphela, 70% yemakhaya abahola ngaphezu kuka-$100,000 ukufunda amaphephandaba.
Umthombo wesithombe: Isitatimende
Emhlabeni wangemva kobhubhane, abathengisi badinga ukuzithoba ngokulinganayo njengabathengi. Lo bhubhane usheshise umkhuba wokuba khona kwe-omnichannel nokuziphatha okuxubile ukwedlula ukuthi abathengi bathenga kanjani. Abathengi bafuna amabhrendi abanikeze okungcono kunayo yonke imihlaba, okubonakalayo, kanye nangaphakathi mathupha. Futhi akugcini ngokuphathelene namaphephandaba kuphela. Ukukhangisa okuphrintiwe kungabandakanya omagazini, izincwajana, amaflaya, namabhodi wokukhangisa. Ngakho-ke, izinto zokuphrinta zingasetshenziswa ukuze kuqondiswe izethameli ezithile kakhulu ekushicilelweni okuqondene nokuqukethwe kanye nokuhlobene nomkhakha.
Ukufanekisa Ifaneli Yokuthengisa Kubalulekile
Amalungu Inhlangano Yezindaba Zamazwe Ngamazwe (INMA) gcizelela iqiniso lokuthi imali yokukhangisa izokhuphuka njengoba umnotho uphuma kulo bhubhane. Kulesi simo, amabhrendi adinga ukuthola izindlela ezihlakaniphile zokwenza ukuphrinta kube yingqikithi.
Esithombeni esibanzi, uhlobo ngalunye lokukhangisa ludlala indima ehlukile. Ukukhangisa kokuphrinta kungathathwa njengokuwusizo ukuqondisa okuphezulu kwefaneli, emele isigaba lapho abathengi bazi khona ngomkhiqizo nemikhiqizo yawo namasevisi. Ngokuphambene, izikhangiso zedijithali zingase zifaneleke kakhulu ekuguquleni okuphansi kwefaneli. Izinkinobho ze-CTA njengokuthi “bhukha manje” noma “thenga manje” zingashayela ukuthengisa.
I-Neuroscience ingase isekele lo mbono. Ocwaningweni lwango-2015, kwasungulwa ukuthi imidiya yokuphrinta (okuqukethwe okusekelwe ephepheni kanye nezikhangiso) ingcono ekukhunjweni komkhiqizo, njengoba ingacutshungulwa kalula ubuchopho bethu. Isibonelo, ucwaningo luveze ukuthi kudingeka i-imeyili eqondile 21% ngaphansi komzamo wokuqonda ukucubungula kunemidiya yedijithali. Ezivivinyweni zenkumbulo yangemuva kokuchayeka, ukukhunjulwa komkhiqizo bekungaphezulu ngo-70% kubahlanganyeli abavezwe kakhudlwana ecezwini lemeyili eliqondile, kunesikhangiso sedijithali.
Ukugxila Okukhulisiwe ku-DEI kanye Nokuqina Kwemvelo Okusunduza Brands Towards Print
Ngo 2020, ukuphrinta ukukhangisa kuzuze amandla ngokumangazayo lapho amabhrendi amakhulu ephendukela ezikhangisweni zokuphrinta zefomu elide emaphephandabeni ahlonishwayo, ukuze abonise imizamo yawo yokulungisa ukuziphatha kwebhizinisi okwedlule. Ngezindaba ezinjengokucwasa ngokobuhlanga, nokungalingani okuthatha indawo ebaluleke kakhulu kumkhakha wezepolitiki wase-US, amabhrendi afana ne-Mastercard ishicilele izikhangiso eziphrintiwe ikhasi eligcwele ku-New York Times, ukukhombisa ukuzibophezela kwazo kulezo zizathu.
Abathengi namuhla, ikakhulukazi i-Generation Z, bazokhetha ukusekela amabhrendi asebenzela ukufeza izinhloso zomphakathi futhi ahambisane nezindinganiso zawo. Ngakho-ke, lezi zinkampani zikhetha indlela ehlala njalo efana namaphephandaba ukukhombisa imibono yazo, kunokubuyela emuva esikhangisweni sedijithali esidlulayo. Lezi zikhangiso bezingakhuthazi abafundi ukuthi bathenge imikhiqizo noma amasevisi abo, kodwa kunalokho zisungula amanani emikhiqizo yazo futhi zikhuthaze isizathu. I-New York Times ibe ne- umlando wokusekela izikhangiso zokumela kusukela ngawo-1920. Isibonelo sakamuva kungaba yileso lapho izinkampani eziphezulu ezifana ne-Unilever, Google, kanye noMorgan Stanley zabeka isikhangiso sokunxusa uMongameli waseMelika uTrump ukuthi angahoxi ku-Paris Climate Accord ngo-2017.
Umthombo wesithombe: I-Geospatial World
Kodwa-ke, ebhizinisini elincane, ukufinyelela i-New York Times kuyindaba ebizayo. Bangase bangene emaphephandabeni endawo ukuze bakhangise ngezindinganiso zabo ukuze bethule kanye namakhasimende angaba khona. Iminyaka eminingi, imali etholwa ngamaphephandaba endawo yehla ngenxa yokukhuphuka kwemithombo yezokuxhumana, kanye namaphephandaba ayizipoki. Kodwa-ke, ziyindwangu ebalulekile yezindaba zomphakathi futhi uchungechunge lwezitayela embonini zizoholela ekubuyeni kwalezi zincwadi esikhathini esizayo. Okuphawuleka kakhulu yi- Umthetho Wokusimama Kobuntatheli Bendawo, okusekude ukuba kuhanjwe, kodwa uma kuba umthetho, amaphephandaba endawo nabafundi bawo, nabakhangisi bangathola uchungechunge lwezinzuzo zezikweletu zentela.
Izikhangiso zokuphrinta zingasiza ekwakheni umbono womkhiqizo njengochwepheshe othembekile embonini. Lokhu kungaholela ekukhuleni kwebhizinisi. Isinqumo sokuthi uzibeka kuphi izikhangiso sinzima, njengoba izethameli zemidiya zihlukene kakhulu kunangaphambili. Kungaba ukuhlakanipha ukubonisana nabezindaba abathembekile kanye nomxhumanisi wezokukhangisa ukuze wenze isinqumo esifanele.
Okuningi Groovy Stuff
Phrinta Amakhadi Amabhizinisi nge Print Peppermint
Qasha Izinsizakalo Zethu Zokuqamba Imidwebo
Hlela amasampula weKhadi Lebhizinisi
Cela i-Quote yeProjekthi Yakho Yokuphrinta Yokwezifiso
← Siyini Isikhala Sombala Welebhu? Futhi yini okufanele uyazi ngakho?
Ingabe udinga ukuba neziqu zasekolishi ukuze ube umklami? →
Thola Peppermint Izibuyekezo!
Okwamakhuphoni, ukunikezwa okuyimfihlo, okokufundisa kokuklama, nezindaba zenkampani.
Ukubhaliswa kwencwajana / Ukubhaliswa kwe-Akhawunti (okuzivelelayo)
"*"kukhombisa izinkambu ezidingekayo
Ukudala Ukuphrinta Kwedijithali Okumangalisa Izithameli Zakho
Ungayifunda kuphi i-SEO yamahhala ku-inthanethi ngo-2022?
Ukukhangisa Art Izibhengezo nezimpawu zokuphawula Business Izisekelo Zekhadi Lebhizinisi Imibono yeKhadi Lebhizinisi & Ukuphefumulelwa Color Design Amahlaya Wokuklama I-Software Software DIY Usomabhizinisi Omkhiqizo Abadumile Fonts Freelance Izinsiza zamahhala Umklami we-graphic Umlando Ukuvezwa Ukuphefumulelwa Izinhlu Ilogo Design Marketing Pantone Paper Photography Photoshop Umklamo wokuphrinta Printing Izisekelo Zokuphrinta Umkhiqizo Design Ukuthengisa izindlu Ngiyazisebenza SEO Qalisa Stickers Students I-T-shirt Design Izibonisi tutorials Bhala ukubuyekeza UX Ividiyo web Design
Cela Isilinganiso Samahhala Nokubonisana